‘कृष्ण खुलालले खानीखोलामा बेथितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्’ – Ujyaalo Nepal
‘कृष्ण खुलालले खानीखोलामा बेथितिको नेतृत्व गरिरहेका छन्’
By ujyaalo	 On Nov 16, 2018 375
२०२५ साल भाद्र २४ गते खानीखोला गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित ताल्ढुंगामा बुवा ज्ञान बहादुर लामा र आमा पदमादेवी लामाको कोखबाट जन्मिएका शेखर लामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) काभ्रेका नेता हुन् । तत्कालीन नेकपा एमाले खानीखोला गाउँपालिकाका इन्चार्ज समेत रहेका उनले राजनीतिमा झण्डै दुई दशकभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन् । वि.स. २०४७ सालदेखि राजनीतिमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न भएका उनी २०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेबाट साल्मेचाकल गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा समेत निर्वाचित बनेका थिए । गाविस अध्यक्ष रहँदा पार्टी संगठन र स्थानीय विकासमा उनले विशिष्ट योगदान गरेको व्याख्या अहिले पनि सुनिन्छ । उनै नेता लामा अहिले खानीखोला गाउँकार्यपालिका र उनी आबद्ध पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट (पार्टी) का विभिन्न गतिविधिहरुको खुलेर विरोध गर्छन् ।उनीसँग खानीखोला गाउँपालिकाको पछिल्लो अवस्था, त्यहाँका स्थानीय सरकारको समीक्षा लगायतका विषयमा गरिएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत छ ।
राजनीतिमा किन लाग्नुभयो ?
त्यतिबेलाको राज्य व्यवस्थाको कारणले म राजनीतिमा लागेको हुँ । एकल जात्तीय राज्य शासनविरुद्ध लडन्ुपर्छ भन्ने लागेरै म राजनीीतमा लागेको हुँ । त्यतिबेलाको राज्य व्यवस्थाको कारणले धेरै समस्याहरु सिजर्ना भएको थियो । त्यसलाई निराकरण गर्नेहेतुका साथ राजनीतिमा लागेको हुँ । सारांशमा भन्नुपर्दा गरिबी, शिक्षा र अभाव राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कारण भएको हो भन्ने लागेर म तिनको विरुद्ध लड्न राजनीतिमा लागे ।
स्थानी यसरकारलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
अहिलेका स्थानीय तहका जन्रपतिनिधिहरुको व्यवहार हेर्दा मलाई गाउँपालिकाहरुमा नियुक्ति गरेको कर्मचारी जस्तो लाग्छ । त्यसले कुनै परिवर्तन गर्न सक्दैन । किनभने अहिले स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेको चाहिँ मृग नचिन्नेलाई सिकार खेल्न पठाएको जस्तो देखिन्छ । कोही मेयरहरु ठेकेदार आफैँ छन्, कोही उपमेयर के छन्, सबै ठाउँका जनप्रतिनिधि त्यस्तै छन् ।
तपाईले त निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नै नियुक्तप्राप्त सरकारका कर्मचारीको रुपमा व्याख्या गर्नुभयो, यो अवस्था कसरी आयो ?
म अघि पनि भने, पहिलो चाहिँ मृग नचिन्नेलाई सिकार खेल्न पठाएर यो अवस्था आएको हो । जसले मृग नै चिन्दैन, उसलाई सिकार खेल्न पठाएर त उसले जुन जन्तु, देख्छ त्यसैलाई मारेर ल्याउँछ र मैले सिकार खेलेर ल्याए भन्छन् । त्यस्ता मान्छेहरुको हातमा स्थानीय तहको नेतृत्व पुग्दा यो समस्या आएको हो ।
त्यस्तै, मुख्य कुरा त हाम्रा जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार छन् । त्यससँगै अहिलेका जनप्रतिनिधिले विकेन्द्रिकृत राज्यसत्ता वा विकेन्द्रिकृत राज्य शासनको अर्थलाई बुझ्न सकेका छैनन् । त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिलेका जनप्रतिनिधिले संघीयता भनेकै बुझेका छैनन् ।
त्यही संघीय संरचनामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै संघीयताको बारेमा थाहा नहोला र ?
विल्कुल थाहा छैन । सीमित मान्छेहरुलाई बाहेक यो संघीयताको बारेमा कसैलाई जानकारी वा ज्ञान नै छैन । राजनीतिक नेतृत्वका पनि केही मान्छेहरुलाई मात्रै संघीयताको बारेमा ज्ञान छ ।बाँकी मान्छेलाई थाहै छैन । तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, दुईतिहाईप्राप्त संघीय सरकार अहिले किन चल्न सकिरहेको छैन ? यसलाई राम्रोसँग नियाल्नु भयो भने कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा नै सरकारलाई थाहा नभएको जस्तो देखिन्छ । प्रदेश सरकार बनेको छ, मन्त्री, मुख्यमन्त्री छन्, अधिकार कहाँनेर हो भनेर उनीहरु नै अलमलमा छन् । यी सबै संघीयता नबुझेरै भएको हो ।
त्यसो भए खानीखोलाका जनप्रतिनिधि संघीयता बुझेका छैनन् ?
स्वभाविक रुपमा मैले भने कि उनीहरुले संघीयताको वास्तविक परिभाषा बुझेका छैनन् ।
तपाईको नजरमा खानीखोलाको विकास किन हुन सकेन ?
सहरका अथवा विकसित ठाउँका मान्छेहरुले डाँडापारिका मान्छेहरुका खासै बुद्धि वा बौद्धिक क्षमता छैन भन्ने खालका आँकलन गर्छन् । त्यसमध्येका जो आदेश मान्छ, त्यसलाई काखी च्याप्ने गरेकाले पनि अहिले खानीखोलाको विकास हुन सकेको छैन । बौद्धिक क्षमता भएकाले अरुको कुरा सुन्दैन भनेर आदेश मान्नेलाई टिकट दिँदा अहिले खानीखोलाको विकास हुन सकेको छैन ।
भन्नाले तत्कालीन एमालेबाट आदेश मान्नेले टिकट पायो, क्षमता भएकाले पाएन, भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, त्यही नै हो ।आदेश मान्नेलाई बिनाशर्त टिकट दिलायो । तर, क्षमतावानहरुलाई पन्छाइयो ।
अहिलेका खानीखोलाका अध्यक्ष कृष्ण खुलालले आदेश मान्ने भएर टिकट पायो भन्न खोज्नुभयो, कसको आदेश मान्नुहुन्छ त उहाँ ?
खुलालजीले अहिलेसम्म व्यक्तिगत आदेशहरु मानेको देखिन्छ । टिकट वितरणमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने ठाउँमा निवर्तमान सांसद् रामहरि सुवेदी थिए । खुलाल र सुवेदी पनौतीका छिमेकी हुन् । बिहान अनि बेलुकी देखिरहने । मेरो आदेश खुलालले मान्छ भनेर सुवेदीले दबाबमा टिकट खुलाललाई दिएको हो ।
त्यति मात्रै कारण त नहोला नि ?
म प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु । अर्को मुख्य कारण भनेको जातिवादले गर्दा खुलालले टिकट पाएको हो । एमालेलाई जनजाति विरोधी अनि, बाहुनहरुको पार्टी भनेर त्यतिबेला जुन खालको आरोप लाग्थ्यो, त्यो चाहिँ त्यतिबेला पुष्टि भयो ।
तपाईले किन टिकट पाएन त ?
मेरो पनि चाहना थियो ।तर, वितरणको क्रममा नियमसंगत ढंगबाट छनौट भएन । टपक्क टिपेर मान्छेलाई टिकट दिँदा मैले नपाएको प्रष्टसँग देख्न सक्नुहुन्छ ।
तपाईले जातिवाद के–केमा देख्नुभयो ?
जातिवाद त अहिले काममा पनि प्रशस्तै भेटिन्छ । जागिर खुवाउने सन्दर्भमा हेर्नुस्, उपभोक्ता समिति गठन गर्दा हेर्नुस्, सबै ठाउँमा अहिले जातिवादले ठूलो काम गरेको प्रष्टै देख्न सक्छौँ । नियमविपरीत कोठे बैठकहरु गरेर कयौँ जातिवादका कामहरु गरेको हामीले देख्न सक्छौँ ।
भन्नाले खानीखोलाका अध्यक्षले ब्राम्हण क्षेत्रीलाई मात्रै अवसर दियो भन्न खोज्नुभएको हो ?
हो, त्यही नै हो ।
खुलालको १८ महिने कार्यकाललाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
०६२ सालदेखि यता राजनीतिको कुनै पनि विधामा खुलाल नदेखिएका पात्र हुन् । साँस्कृतिक अपचलन र बिचलनले गर्दा खुलालको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो । त्यो आर्थिक अवस्थालाई जेसुकै भए पनि सुधारोस्, भन्ने हेतुले पेन्सन स्वरुपले उनलाई टिकट दिएको हो । त्यसैले उनीबाट अपेक्षाकृत काम हुन्छ भन्ने मेरो सपना पनि थिएन । त्यही भएर उनले के गर्न सक्यो अनि सकेन भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ, तपाई आफैँ पनि गएर हेर्न सक्नुहुन्छ ।
खुलालले केही गरेको छैन भन्न खोज्नुभएको हो ?
खुलालले केही गर्न सकेनन्, म भन्दिँन, अरु केही गर्न नसके पनि खुलालले खानीखोलाभित्रका बेथितिको नेतृत्व गरेका छन् । सबै बेथितिहरु जन्माएर उनले त्यसको सक्षम ढंगबाट गरेको देखिन्छ ।
त्यसबाहेक अन्य विकास निर्माणका कुनै पनि काम उनले गरेका छैनन् । उनले काम गरेको भए त मूल्यांकन गरे भइहाल्यो नि । ५० लाखको योजनामा कांग्रेसले जितेको वडामा ५ लाखले १७ सय मिटर बाटो खन्छ, कम्युनिष्ट पार्टीले नेतृत्व गरेको भन्ने ठाउँमा ५० लाखमा जम्मा २२ सयमिटर खन्छ । भनेपछि त्यही अनुमान गर्नुभए भइहाल्यो नि ।
खुलालले बेथितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?
पहिलो कुरा त, हाम्रा जनप्रतिनिधि जिम्मेवार छैनन् । कहाँ–कहाँबाट पैसा कमाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान छ । आफैँ खान लागि परेका छन् । कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ, भन्नेतिर मात्रै हाम्रा जनप्रतिनिधिको ध्यान गएको देखिन्छ । जनप्रतिनिधिले त विकास निर्माणका कुन कुन कामहरु राम्रोसँग उचित ढंगबाट भएको छ या छैन भनेर निगरानी राख्नुपर्ने हो । तर, जनप्रतिनिधि आफैँ डोजर किन्न थालेपछि, उनीहरुबाट के आशा गर्ने ? कस्तो अवस्था सिर्जना भयो भन्ने आफैँ सोच्नुस् ।
कसले किन्यो डोजर चाहिँ ?
वडा नं. ५ का अध्यक्ष दुर्गा तिमिल्सिना र ६ नं. का अध्यक्ष मानबहादुर गोलेजी डोजर किन्न सफल हुनुभयो । आफ्नो सम्पति भए पनि उहाँहरुले यतिबेला देखाउनु हुँदैनथ्यो । किनभने मान्छे हेरिरहेका छन् । आफ्नो सम्पति बेचेर किन्दा त अहिले आलोचना खप्नुपर्छ भने उनीहरुले त स्थानीय तहको ऋण अस्ति प्रदेशसभाको निर्वाचनसम्म हाम्रो पैसा कहिले आउँछ दाइ भनेर सोधिरहेको थियो, त्यो ऋण त्यतिबेलासम्म थियो, तर असारसम्म आइपुग्दा त डोजर खरिद गर्न सक्नेसम्मको हुनुभएछ ।
सरकार त पार्टीले चलाउनुपर्ने होइन र ?
तर, पार्टी अहिले माथिबाटै भद्रगोल भइसकेको छ । त्यसो भएर अब पार्टीले सरकार चलाउने अवस्था छैन ।
तर, नेकपा बन्नुअघि एमाले र माओवादी अलग पार्टी हुँदा एमाले त सिस्टममै थियो होइन ?
माओवादी र एमाले फरक हुँदा एमालेको कमिटि थियो । सिस्टममै थियो । तर, पार्टी कमिटिमा निर्णय भएका कुराहरु स्थानीय सरकारले कार्यान्वयन नै गरेनन् ।
किनभने ती जनप्रतिनिधि एमाले पार्टीको थिएनन्, उनीहरु व्यक्तिगत सेवाको लागि उपस्थित भएका मान्छे हुन् । राष्टिय रुपमा हेर्नुभयो भने पनि जितेर गएकाहरु पनि कम्युनिष्ट होइनन्, त्यसैले सरकार सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।
तपाईजस्तो जिम्मेवार मान्छेले सार्वजनिक रुपमै विरोध गर्नपर्ने अवस्था कसरी आयो ?
पार्टीको जिम्मेवार मान्छेले भनेको कुनै पनि कुराहरु कार्यान्वयन नै नहुने भएपछि सार्वजनिक रुपमा विरोध नगरेर के गर्ने त ? मुख्य कुरा भनेको कुनै पनि जनप्रतिनिधि पार्टीको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न जाने हो । तर, त्यो कुराहरु कार्यान्वयनमा लैजान नसकेपछि त विरोध नै गर्ने होइन ? माथिको सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको सपना देख्ने तर तलकाहरु डोजर किन्नतिर लागेपछि पार्टीको सपना पूरा हुन्छ ?
त्यहाँका सचेतवर्ग खानीखोलाको बेथिति टुलुटुलु हेरेर किन बसेका छन् त ?
पहिलो कुरा त, जनताले त्यहाँका सरकारसँग होइन, पार्टीसँग विश्वास गरेका छन् । पार्टीमा आस्था भएका कारण उनीहरुले त्यही पार्टीका सरकारको खुलेर विरोध गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले त्यहाँका सचेतवर्ग बेथिति हेरेर बसेका होइनन्, उनीहरु पार्टीका कारण चुप छन् ।
खुलाल नेतृत्वको सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
पहिलो कुरा त खुलाललाई जसले प्रतिस्थापन गराउन लाग्यो, त्यो मान्छेले जनताको बहुदलीय जनवादमा कार्यक्रमिक रुपमा आएको थियो, त्यो कुराहरु अब जनताले घाँस दाउरा गर्ने ठाउँमा कार्यान्वयनमा लैजान आदेश दिन्छ कि दिँदैन ? दिँदैन भने खुलाल आफैँले अब ती आदेशकर्तासँग सुझाव लिनुप¥यो ।
पार्टीलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
तल्ला कमिटिहरु पूरै अस्तव्यस्त छ, त्यसैले जतिसक्दो चाँडो पार्टी एकीकरणलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउन म सुझाव दिन्छु ।
अन्तिममा म तपाईलाई सुझाव दिन चाहन्छु । डाँडापारिजस्तो विकट ठाउँमा जन्मिएर पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान दिनुभएका तपाईजस्ता व्यक्ति अब बेला–बेलामा गाउँ जानुप¥यो । खानीखोलाको विकासका सन्दर्भमा भएका कामहरुलाई जस्ताको तस्तै सार्वजनिक गर्ने कामको थालनी तपाईले अब झन् सशक्त रुपमा गर्नुप¥यो ।
आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक ऋण लिन्छौंः प्रधानमन्त्री
पार्टी प्रतिबन्ध भनेको अनावश्यक उत्तेजित पार्ने काम होः विप्लवपुत्र प्रकाश
राज्य बलजफ्ती आउने हो भने उसले पनि कडा प्रतिरोधको सामना गर्नुपर्नेछः विप्लव
‘३ नम्बर प्रदेशको राजधानी काभ्रे नै हुनुपर्छ’
एसइईको नतिजा साँझ ५ बजे सार्वजनिक गर्ने तयारी, नतिजा कुर्दै करिश्मा र…
जगजित सिंहको नेपाली भिडियो सार्वजनिक
गलबन्दी विवाद सदनमा, शम्भु राई र मतियारले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग…
नेपाली महिलासहित सात जनाको हत्या गर्ने पूर्वसैनिकलाई ‘सातवटा…
‘प्रधानमन्त्रीले त गर्न खोजेकै जस्तो लाग्छ, सल्लाहकारहरु सहीकुरा…
सूचना तथा प्रशारण विभाग, दर्ता नं. :- ०५–२०७३/०७४, युएन मिडिया नेटवर्कका लागि प्रकाशक तथा प्रधान सम्पादक - सूर्य खड्का, कार्यालय :– बानेश्वर-काठमाडौं, फोन :– 9841896857, E-Mail :- समाचारका लागि : [email protected], [email protected],